Kenya iyo Soomaaliya oo wada-hadallo u bilaawday - Awdinle Online
Kenya iyo Soomaaliya oo wada-hadallo u bilaawday
Kenya waxay ku adkeysatay joogitaankeeda diblomaasiyadeed ee Muqdisho waxaana ay sheegtay in dhawaan ay bilaabi doonto dhisme cusub oo safaaradeed, iyada oo dooneysa inay hagaajiso xiriirka ganacsi ee rasmiga ah ee kala dhexeeya Soomaaliya.
Dhismaha cusub ayaa la macno ah in Kenya aysan sii kireyn doonin goob ay ku howlgasho howlaheeda diblomaasiyadeed, taasoo u oggolaaneysa saraakiisha inay si wanaagsan u qabtaan howlaha xiriirka Soomaaliya oo arrimaha ganacsiga ugu horeeyo.
Arrintan ayaa timid kadib markii wafdi ka socda madaxda ugu sareysa ee Arimaha Dibada ay Sabtidii soo gaareen magaalada Muqdisho si ay ugala hadlaan iskaashiga Ganacsiga oo ay qeyb ka tahay in dib loo bilaabo howlihii qaadka oo ay Soomaaliya joojisay iyo sidoo kale xiriirka dhanka Amniga.
“In aan ka fikirno in caqabadaha si buuxda loo xaliyaa ugu horeyn ka hor intaanan bilaabin ganacsiga iyo iskaashiga waa inaan dhayalsanaa oo la fahmaa aasaaska horumarka,” PS Kamau ayaa u sheegay Nation.
Waxaa uu tilmaamay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo howlihii ganacsiga Soomaaliyana ay xayiraadaha dhanka ganacsiga qaado.
Xoghayaha guud ee arrimaha dibadda Macharia Kamau ayaa sheegay in Kenya ay u aragto xiriirka ganacsi mid ka wanaagsan kan lagu horumarin karo xiriirka guud ee ka dhexeeya dalalka.
Qiyaastii 1.5 milyan oo muhaajiriin ah oo ka tagay Soomaaliya ayaa ku nool Kenya, inkasta oo saddex meelood meel ka mid ah ay ku jiraan karaan xeryaha qaxootiga, taas oo ka dhalatay sannado badan oo nabadgelyo-xumo ka jirtay Soomaaliya.
Dhinaca kale, Soomaaliya waxay martigalisay ilaa 35,000 oo Kenyan ah, oo inta badan ka shaqeeya qeybaha gargaarka iyo shirkado ganacsi.
Previous articleWeerar lagu qaaday Caawa Hoyga Guddoomiye kuxigeenka Baarlamaanka Jubbaland
Next articleKhudbadaha Musharixiinta Madaxweynaha Hir-Shabeelle & kuxigeenkiisa oo bilaabanaya